April 2015 - Page 51 of 51 - iftineducation.com
Maxaa sababa tabardarida galmada Ee ku timaada (kacsiga dumarka)
aadan21 / April 1, 2015
iftineducation.com – Tabardarida soo wajahda dumarka xiliga galmada ee afka qalaadna lagu magacaabo (sexual dysfunction) ayaa waxaa lagu qeexa dhibaato soo wajahda xiliga isu taga jinsiga taas oo alaaba lala xiriiriyo qanaaco la’aan kadhalata isu taga. Tusaale ahaan culimada amaba dhaqaatiirta jinsiga ayaa waxey sheegaan in illaa 4 heer uu maro isu taga jinsiga taas oo ah, dareemid raaxo marka hore,…
Hababka ugu Casriyeeysan ee Xaga Galmada Casriga ah
iftineducation.com – Waxaa jira Habab badan oo galmada loo sameeyo , mana lagu soo koobi karo sharaxaad waxaase ka qaadaneynaa dhowr hab oo galmada cusub ah oo raaxo laga helayo. Hadaadan aheyn Xaas ama Xaasle muhiim ma ah in aad aqriso qoraalkaan waayo waxaa sura gal ah in dareen aad ka qaado ama xiligaan diyaar adaan u aheyn barashada . Hadaba…
Jimicsiga Oo La Xaqiijiyay Inuu Ka Hortago Cudurro Halis Ah
iftineducation.com – Dadka jimicsiga badiya ayaa la xaqiijiyay in ay ka badbaadi karaan cudurada badan oo nolosha qofka halis ku ah. Jimicsiga ayaa la sheegay in uu yareeyo khatarta Kansarka iyo Kolestaroolka. Daraasad laga sameeyay dalka Ingiriiska ayaa lagu ogaaday in inta badan oo la jimicsadaa ay ay kaa sii dheeraynayso cuduro badan. Warbxinta ayaa intaasi ku dartay, hadii qofka qaba…
iftineducation.com – Jariidada Daily mail ee kasoo baxda cariga England ayaa qortay maqaal ku aadan cunnooyinka faa’idada u ah caafimaadka aadanaha gaar ahaan kuwa tamarta laga helo. Maqaalkan ayaa lagu xusay in qumbaha uu yahay mid laga heli karo tamar aad u badan. Sido kale maqaalkan ayaa lagu xusay in aad iska yareyso cusbadda iyo sonkorta taasoo kugu keeni karta daal…
VIDEO: Sida Loo Diyaariyo Rooti Ka Samaysan Khudaar Kala Duwan
iftineducation.com – Waa marka kale iyo barnaamijkii xiisaha badnaa ee Cooking With Hafsa, Barnaamijkaan ayaa ah mid loogu talogalay in lagu soo bandhigo cunto Somali casriyaysan oo caafimaad iyo waxtar leh sida fududna loo sameeyay. Qeybtaan ayaa ku saabsan rooti laga sameeyay khudaar iyo waxyaabo kale oo kala duwan. Daawasho wacan:
Faaidooyinka Caanaha Garoorka (Yogurt) Iyo Sida Jirka loogu Qurxiyo
iftineducation.com – Yogartka ( caanaha garoorka ah ) waxaa la isticmaalayey boqolaal sano si loogu quruxiyo wajiga, aadna waxaa u isticmalayey hindida iyo bakistaanta. Yogartka cadi waa noocyo, nooc waa rasiim ( adayg ) noocna wuu jilicsanyahay, dhamaantood kuu doono ha ahaadee waad isticmaali kartaa. Yogurtka waxaa ku jira macdanta zink iyo lactic acid kuwaasoo kaalin muhiim ah ka qaata caafimaadka…